परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | "देहधारणको रहस्य (२)" | अंश ११२ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “देहधारणको रहस्य (२)” | अंश ११२
7 |19 अप्रील 2021
परमेश्‍वर यस पृथ्वीमा जुन काम गर्न आउनुहुन्छ त्यो यस युगलाई डोऱ्याउन, एउटा नयाँ युग सुरु गर्न र पुरानो युगलाई समाप्त गर्नका निम्ति हो। उहाँ पृथ्वीमा कुनै मानिसको जीवनको बिताउन, मानव संसारको जीवनको आनन्द र दुःखहरू आफै अनुभव गर्न, वा आफ्‍नै हातद्वारा कुनै विशेष व्यक्तिलाई सिद्ध बनाउन वा कुनै व्यक्ति बढ्दै गएको व्यक्तिगत रूपमा हेर्न आउनुभएको होइन। यो उहाँको काम होइन; उहाँको काम भनेको नयाँ युगलाई सुरु गर्नु र पुरानोलाई अन्त्य गर्नु मात्रै हो। अर्थात्, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा एउटा युगको सुरु गर्नुहुनेछ, व्यक्तिगत रूपमा अर्कोलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ, र व्यक्तिगत रूपले आफ्नो काम गरी शैतानलाई पराजित गर्नुहुनेछ। प्रत्येक चोटि जब उहाँले आफ्नो काम व्यक्तिगत रूपमा गर्नुहुन्छ, तब त्यो उहाँले युद्धको मैदानमा खुट्टा टेक्नुभएको जस्तो हुन्छ। सर्वप्रथम, शरीरमा हुँदा उहाँले संसारलाई परास्त गर्नुहुन्छ र शैतानमाथि विजयी बन्नुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण महिमा लिनुहुन्छ र दुई हजार वर्षको सम्पूर्ण कामको पर्दा उठाउनुहुन्छ, जसले गर्दा पृथ्वीमा सबै मानिसले हिँड्ने सही मार्ग र जिउनका निम्ति शान्ति र आनन्दको जीवन पाउन सक्छन्। तापनि, परमेश्‍वर मानिससँग लामो समयसम्म यस संसारमा बस्न सक्नुहुन्न, किनकि परमेश्‍वर, परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ, र जे भए पनि मानिसजस्तो हुनुहुन्न। उहाँले सामान्य व्यक्तिको जीवनकाल बाँच्न सक्नुहुन्न, अर्थात् उहाँ पृथ्वीमा त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा वास गर्न सक्नुहुन्न, जो कुनै साधारण व्यक्तिभन्दा केही पनि होइन, किनकि उहाँसँग आफ्नो मानव जीवन थामेर राख्नका निम्ति एक सामान्य व्यक्तिको सामान्य मानवताको केवल थोरै मात्र अंस छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्‍वरले कसरी पृथ्वीमा एउटा परिवार सुरु गर्न, व्यवसाय बनाउन र छोराछोरीहरूलाई हुर्काउन सक्नुहुन्छ? के त्यो उहाँको बदनाम हुनेछैन र? सामान्य रूपले काम गर्न दिने उद्देश्यले मात्र उहाँलाई सामान्य मानवता प्रदान गरिएको हो, एक सामान्य मानिसले जस्तो परिवार र व्यवसाय बनाउन दिनको लागि होइन। उहाँको सामान्य ज्ञान, सामान्य दिमाग र सामान्य भोजन र उहाँको शरीरको लुगा नै उहाँसँग सामान्य मानवता छ भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाण हो; उहाँसँग सामान्य मानवता छ भनी प्रमाणित गर्न उहाँको परिवार वा व्यवसाय हुनु आवश्यकता थिएन। यो पूर्ण रूपमा अनावश्यक हुनेथियो! परमेश्‍वर पृथ्वीमा आउनु भनेको वचन देहधारी हुनु हो; उहाँले मानिसलाई उहाँको वचन बुझ्‍न र उहाँको वचन हेर्न दिइरहनुभएको छ, अर्थात् देहले गरेको काम मानिसलाई हेर्न दिनुहुन्छ। मानिसहरूले उहाँको देहलाई कुनै खास तरिकाले व्यवहार गरून् भन्ने होइन, तर मानिसले आखिरीसम्म आज्ञापालन गरोस्, अर्थात् उहाँको मुखबाट निस्केका सबै वचन पालन गरोस्, र उहाँले गर्नुहुने सबै काममा समर्पित होस् भन्ने उहाँको उद्देश्य थियो। उहाँले केवल शरीरमा काम गरिरहनुभएको छ; उहाँले जानाजानी मानिसलाई उहाँको देहको महानता र पवित्रतालाई उचाल्‍न भनिरहनुभएको छैन, बरु उहाँले आफ्नो कामको ज्ञान र उहाँले पाउनुभएको सम्पूर्ण अधिकारको प्रदर्शन गर्दैहुनुहुन्छ। त्यसकारण, उहाँसित उत्कृष्ट मानवता भए पनि उहाँले कुनै घोषणा गर्नुहुन्न, र उहाँले गर्नुपर्ने काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ। परमेश्‍वर देहधारी हुनुभयो र पनि उहाँले आफ्नो सामान्य मानवताको किन प्रचार गर्नुहुन्न वा गवाही दिनुहुन्न, तर केवल आफूले गर्न चाहनुभएको काम गर्नुहुन्छ त्यो तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ। त्यसकारण, तिमीहरूले देहधारी परमेश्‍वरबाट देख्न सक्ने भनेको उहाँ ईश्‍वरीय रूपमा जो हुनुहुन्छ त्यही मात्र हो; यसको कारण के हो भने मानिसले अनुकरण गर्नको लागि उहाँले उहाँ मानिसको रूपमा को हुनुहुन्छ त्यो कहिल्यै पनि घोषणा गर्नुहुन्न। जब मानिसले मानिसहरूलाई डोऱ्याउँछ तब मात्र उसले अरूबाट प्रशंसा र अधीनता प्राप्त गरेर अरूको नेतृत्व प्राप्त गर्नको लागि मानिसको रूपमा ऊ को हो भनी बताउँछ। यसको विपरीत, परमेश्‍वरले उहाँको कामद्वारा मात्रै मानिसलाई जित्नुहुन्छ (अर्थात् मानिसले प्राप्त गर्न नसक्ने काम); उहाँलाई कुनै मानिसले प्रशंसा गर्नु वा मानिसलाई उहाँको श्रद्धा गर्ने बनाउने बारेमा कुनै प्रश्न नै छैन। उहाँले मानिसभित्र उहाँप्रति श्रद्धाको भाव वा उहाँको अथाहपनको भाव मात्रै हालिदिनुहुन्छ। परमेश्‍वरले मानिसलाई प्रभावित पारिरहनुको कुनै आवश्यकता छैन; तैँले उहाँको स्वभाव देखेपछि उहाँलाई आदर मात्र गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरले गर्नुहुने काम उहाँकै हो; मानिसले उहाँको सट्टामा यो गर्न, न त मानिसले यसलाई प्राप्त नै गर्नसक्छ। परमेश्‍वरले मात्रै आफ्‍नो काम आफै गरेर मानिसलाई नयाँ जीवनमा ल्याउनका निम्ति नयाँ युग ल्याउनुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुने काम भनेको मानिसलाई नयाँ जीवन आफ्नो बनाउन सक्ने तुल्याउनु र नयाँ युगमा प्रवेश गराउनका निम्ति हो। बाँकी काम सामान्य मानवता भएका ती व्यक्तिहरूलाई सुम्पिएको छ, जसलाई अरूले इज्‍जत गर्छन्। त्यसकारण, अनुग्रहको युगमा, उहाँले दुई हजार वर्षको काम आफ्नो तेत्तीस वर्षको शरीरबाट मात्र साढे तीन वर्षमा पूरा गर्नुभयो। जब परमेश्‍वर पृथ्वीमा आफ्नो काम पूरा गर्न आउनुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि केही वर्षको छोटो अवधिभित्र दुई हजार वर्षको वा एउटा सम्पूर्ण युगको काम पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँले ढिलो गर्नुहुन्न, र उहाँ रोकिनुहुन्न; धेरै वर्षको काम केही वर्षभित्रै पूरा होस् भनेर उहाँले केवल त्यसलाई छोट्याउनुहुन्छ। यसको कारण के हो भने, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो पूर्ण रूपमा नयाँ बाटो खोल्न र नयाँ युगतिर डोऱ्याउनका निम्ति हुन्छ।
सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूको पढाइ परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू सुसमाचारीय चलचित्रहरू मण्डली जीवनका गवाहीहरू कोरल भिडियो श्रृङ्खलाहरू मण्डली जीवन—विभिन्‍न कार्यक्रम श्रृंखलाहरू म्यूजिक भिडियोहरू चलचित्रका विशेष अंशहरू
इसाई गीत | परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको घोषणा